USTC (ယခင် UST) သို့ ထိပ်တန်း Decentralized Stablecoin အစားထိုးများ - Token Myanmar
Terra Classic (LUNC; ယခင်က LUNA) ၏ မကြာသေးမီက ပျက်ကျမှုတွင် လူအများအပြား ဒေဝါလီခံခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယား တာဝန်ရှိသူများက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတ်သေမှု ၈ မှု အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒီထိုးနှက်မှုကြောင့်
Stablecoins သည် မတည်ငြိမ်မှုမှလွတ်မြောက်ရန် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို ရပ်ထားရန် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ USTC (ယခင် UST) စျေးကွက်ထုပ်ဖြင့်အကြီးဆုံးတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများနှင့် Cosmos blockchain ရှိတစ်ခုတည်းသောအကြီးဆုံးတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများထဲမှဖြစ်သည်။
ဒါက ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ algorithmic တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့သည် ပြန်လည်ရယူသည့်အမှတ်အောက် ကျဆင်းသွားသည်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ IMF အကြီးအကဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ကျောထောက်နောက်ခံမထားသော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများသည် ပိရမစ်အစီအစဥ်များနှင့် ဆင်တူသည်ဟုပင် အကြံပြုခဲ့သည်။
သို့သော်၊ UST ကဲ့သို့ သမ္မာကျမ်းစာကဲ့သို့ ပျက်စီးမှုတစ်ခုသည် တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့အတွက် ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သမိုင်းက ဤအရာသည် ထင်ရှားသောရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသော်လည်း UST ၏ အသုံးဝင်မှုနှင့် LUNC-UST ဝန်းကျင်ရှိ အသိုင်းအဝိုင်းများသည် အခြားနည်းဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မရဏခရု – ဤတွင် မှားသွားသည်
Stablecoins များသည် တန်ဖိုးကို fiat ငွေကြေး သို့မဟုတ် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသို့ ပေါင်းထည့်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ USTC သည် ၎င်းအား ကျောထောက်နောက်ခံမပြုဘဲ အမေရိကန် ဒေါ်လာသို့ ချိတ်ဆွဲထားသော ထိုကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်သော coin တစ်ခုဖြစ်သည်။
LUNC သည် mint နှင့် burn mechanism ကိုအသုံးပြု၍ USTC ၏စျေးနှုန်းကို အယ်လဂိုရီသမ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ USTC ရဲ့ ဘယ်တော့လဲ။ ဝယ်လိုအားမှ ထောက်ပံ့မှု အချိုးက မြင့်မားတယ်၊ LUNC က ပိုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် USTC ၏လုပ်သောအခါတွင် LUNC ပိုများသည်။ supply-to-demand အချိုးမြင့်မားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် USTC ၏စျေးနှုန်းကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 ဒေါ်လာဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည့် ကုန်သည်များအတွက် မျှတသောအခွင့်အရေးကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
သို့သော်၊ အရောင်းဖိအားသည် algorithm ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အလွန်မြင့်မားလာသောအခါ LUNC သည် hyperinflate စတင်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကို သေခြင်းအလိမ်အညာအဖြစ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသည့်အချက်ဆီသို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် USTC သည် $0.01 ထက်နည်းသည်။ LUNC သည် ၎င်း၏ အချိန်တိုင်း အမြင့်ဆုံးထက် 99% ကျော် ကျဆင်းနေသည်။.
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော အခြားရွေးချယ်စရာများ – ရှေ့သို့လမ်းစ
Algorithmic Stablecoins ၏ ကျရှုံးမှုသည် ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံး၏ အဆုံးကို မဆိုလိုပါ။ အဲဒီအစား၊ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို အရေးကြီးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ပေးတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး ရှောင်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤသည်မှာ crypto ၏ကမ္ဘာသို့ဝင်ရောက်စဉ်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အယ်လ်ဂိုရီသမ်မဟုတ်သော၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများစာရင်းဖြစ်သည်။
USDr Avalanche blockchain ၏ပထမဆုံးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော crypto on-ramp ဖြေရှင်းချက် METL မှစရံပေးသော၊ fiat-ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောတည်ငြိမ်သောတိုကင်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကတည်းက METL ၏ USDr တည်ငြိမ်သောတိုကင်ဖြတ်ပိုင်းကို USD ကိုအသုံးပြု၍ 1:1 အချိုးဖြင့် အပေါင်ခံထားပါသည်၊ ၎င်းသည် LUNC နှင့် အခြားသော algorithmic stabilitycoins များကဲ့သို့ မမျှော်လင့်ထားသောရောင်းချမှုဖိအားများကြောင့် ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
USDr တိုကင်၏ ထုတ်ပေးသည့် ယန္တရားသည် သုံးစွဲသူများသည် DeFI ဂေဟစနစ်နှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်နိုင်ရန် တိုကင်၏ အမှန်တကယ် ထုတ်ပေးသူများ ဖြစ်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ယင်းကြောင့် METL သည် မည်သည့် MTL (Money Transmitter Licensing) လိုအပ်ချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး NY မှလွဲ၍ US ရှိ ပြည်နယ်အားလုံးတွင် ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရရှိစေပါသည်။
METL သည် မည်သည့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုမဆို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဘဏ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှ ထပ်မံကာကွယ်ပေးသည့် ၎င်းတို့၏လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် သုံးစွဲသူ၏ရန်ပုံငွေများကို မယူဆောင်ပါ။ METL သည် လက်ရှိတွင် METL မိုက်ခရိုဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ developer တိုင်းအား FIAT gateway တစ်ခုတည်ဆောက်ခွင့်ပြုရန်နှင့် မူရင်းဝင်ပေါက်ကိုလိုချင်သည့် DeFI ပလပ်ဖောင်းတွင်မဆို plug/play လုပ်နိုင်ရန် SDK တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေပါသည်။ METL သည် USPTO ရုံးမှထုတ်ပေးသော ဤနည်းပညာအတွက် နှစ် 20 မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
DAI၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောတည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MakerDAOEthereum-based peer-to-peer အဖွဲ့အစည်းသည် အပေါင်ပစ္စည်းဖြင့် ချေးငွေများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။
USDC နှင့် USDT နှင့်မတူဘဲ၊ DAI သည် အပေါင်ခံပစ္စည်းလွန်၊ crypto-ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော stabilitycoin ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးသော အပေါင်ပစ္စည်းသည် အခြား cryptocurrencies ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်း၏ “အပေါင်ခံပစ္စည်း လွန်ကဲခြင်း” သဘောသဘာဝသည် အပေါင်ခံထောက်ပံ့သည့် DAI ၏တန်ဖိုးသည် DAI ၏တန်ဖိုးထက် ကြီးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ $1.5 တန်ဖိုးရှိ ETH-based (ERC-20) တိုကင်များသည် DAI ၏ $1 တန်ဘိုးကို ပြန်ပေးသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းမျိုးအစား၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောမပြောင်းလဲနိုင်သောနှင့် ထိန်းကျောင်းနိုင်သော စမတ်စာချုပ်များသည် စျေးကွက်ဒိုင်းနမစ်အပေါ်အခြေခံထားသော အပေါင်ပစ္စည်းပမာဏကို တိုးခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းဖြင့် DAI ၏တံဆိပ်ကို $1 သို့ ထိန်းသိမ်းထားသည်။
EOSDT သည် အပေါင်ပစ္စည်း လွန်ကဲသော၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော crypto-ကျောထောက်နောက်ခံ တည်ငြိမ်သော coin တစ်ခုဖြစ်သည်။ မျှခြေPolkadot ဂေဟစနစ်ရှိ ကွင်းဆက်ငွေကြေးဈေးကွက် ပရောဂျက်တစ်ခု။
အသုံးပြုသူများသည် 1% APR အတိုးနှုန်းအနည်းငယ်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အပေါင်ခံခြင်းဖြင့် EOSDT ချေးယူနိုင်ပါသည်။
Stabilitycoin တွင် EOSDT နှင့် ၎င်း၏ကိုင်ဆောင်ထားသူများအား စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုမှ အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် “တည်ငြိမ်မှုရန်ပုံငွေ” ဟုခေါ်သော အာမခံယန္တရားလည်း ပါရှိပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ခုံသမာဓိလူကြီးမင်းများကို လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် EOSDT ၏စျေးနှုန်းကို $1 ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် USTC ၏ ယန္တရားနှင့် ဆင်တူသည်။ သို့သော် USTC နှင့်မတူဘဲ၊ EOSDT သည် အယ်လဂိုရီသမ်မဟုတ်ပါ၊ လက်ရှိတွင် အပေါင်ပစ္စည်းပြုလုပ်ခြင်းအချိုးတစ်ခုရှိသည်။ 281%.
suUSD crypto-ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော၊ overcollateralized stabilitycoin တစ်ခုဖြစ်သည်။ SynthetixDeFi ဆင်းသက်လာမှုများ ရောင်းဝယ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် ETH အခြေခံ ပရိုတိုကော။ sUSD သည် Ethereum ကွန်ရက်တွင် ဤကွင်းဆက်ပေါ်ရှိ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရန် တံတားတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
Synthetix ရှိ ပေါင်းစပ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို “Synths” အဖြစ်ရည်ညွှန်းပြီး ရှေ့ဆက်တွင် “s” ဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ sBTC၊ sETH နှင့် sSOL တို့သည် ဥပမာအချို့ဖြစ်သည်။ အလားတူ၊ sUSD သည် ပေါင်းစပ်တည်ငြိမ်သော coin ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
RSV collateralized stabilitycoin တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော အခြားတိုကင်များနှင့်မတူဘဲ၊ RSV သည် ပေါင်းစပ်အပေါင်ပစ္စည်းပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ fiat နှင့် cryptocurrencies ပေါင်းစပ်ထားသောဤတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးကိုပြန်ပေးသည်။
RSV သည် ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းမြင့်မားသော နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများအား ခိုင်မာသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအကာအကွယ်ကို ပေးဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် ပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည်။ Reserve Dollar (RSV) သည် ၎င်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည့် တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့ဖြစ်သည်။
UST ကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုခိုင်မာသည်၊ ပိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အားလုံးထက်၊ ပိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပိုရှိကြသည်။ သို့သော် အရာရာတိုင်းတွင် လုံ့လဝီရိယ၏ အရေးပါမှုကို အလေးအနက်ထား၍ မရပေ။
မည်သည့် stabilitycoin ကိုမဆို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီ သင်၏သုတေသနကို သေချာစွာလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပရောဂျက်၏အဖွဲ့၊ ၎င်းတို့၏ခြေရာခံမှတ်တမ်းနှင့် အရေးအကြီးဆုံးမှာ ပရိုတိုကော၏တည်ဆောက်ပုံကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ။ တခါတရံမှာ ခက်ခဲပေမယ့် လုံးဝလိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် crypto ဒိုမိန်းသည် မတည်ငြိမ်မှုနှင့် မသေချာမရေရာမှုများနှင့်အတူ အခြေတည်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲမှုအသစ်များသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်များကို အမြဲသတိထားရပါမယ်။ သို့သော်လည်း အနာဂတ်ဘဏ္ဍာရေး ထွန်းလင်းတောက်ပလာသောအခါတွင် မုန်တိုင်းသည် မကြာမီ ပြီးဆုံးတော့မည်ဖြစ်သည်။ Stablecoins သည် ဤအနာဂတ်ကို သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။